Soo-saarista Raaxada Shiinaha Soo-saarista Weelka Guriga iyo Warshaddiisa | Yi'an
40 cagaha guriga weelka maraakiibta raaxada leh oo leh qolka jiifka qolka musqusha ee ku yaal Shiinaha.
Laba qof, NEW Life Style, sida moodada, laakiin aan ahayn isbeddel isbeddel ah, oo aan caadi ahayn, laakiin had iyo jeer way ka duwan yihiin, ma aha tarjumaadda Nolosha, laakiin waa habka Nolosha si ay isu caddeeyaan. Subaxdii toos oo naftaada diyaar u noqo hore Muraayad qurxoon Soo noqo fiidkii, dharka iyo qurxinta iska dhig, musqusha yar ee jilicsan, ku raaxayso qubayska Mararka qaarkood waxaan noqon karnaa mid aad loo wada dhan yahay, laakiin gabi ahaanba wax tanaasul ah ma sameyn karno, jacaylka ayaa ah, gurigu sidoo kale, sida tani waa in ka badan 40 mitir murabac oo meel jilicsan oo xarrago leh.
Laga soo bilaabo fikradda mashruuca, naqshadeynta illaa soo-saarka, dhismaha, rakibaadda, dhammaanteenna waxaan u qaadannaa macaamiisha inay tahay xarunta, shirkaddu waxay siisaa alaabooyin iyo adeegyo ay ka mid yihiin guryo horay loo sii diyaariyay, iskudhafid xarumaha, guryaha goobta, guriga guurguura, derbiyada waxqabadka, sanduuqa dirista, birta fudud. guriga, dhismaha warshad qaab-dhismeedka birta ah, iyo waxqabadyada, caigang trailer, trailer biraha fudud, sanduuqa, trailer ku meel gaar ah, qolka isku dhafan, caigang guddiga sanduuqa, iwm, Ku soo dhowow inaad la tashato oo aad la xaajooto.
Faa'iidooyinka Guryaha Weelka:
1. Gaadiid ku habboon, gaar ahaan ku habboon unugyada inta badan beddela goobaha dhismaha;
2. xoog leh oo waara, dhammaantood ka kooban bir, oo leh awood ka-hortagga dhul-gariir, awood-ka-beddelidda;
3. waxqabadka shaabadu waa wanaagsan yahay, habka wax soo saarka adag ayaa ka dhigaya qolka waxqabadka noocan oo kale ah inuu leeyahay cidhiidhi biyo oo wanaagsan;
4. guriga waxqabadka oo ku saleysan shaashadda birta caadiga ah, waxaa laga soo qaadan karaa isku-dhafnaan badan oo boos. Sida qolka kulanka, jiifka, jikada, musqusha iyo wixii la mid ah. Ballaca caadiga ah waa 2.4 mitir, dhererkiisuna yahay 2.2 mitir, dhererka 4 mitir ilaa 12 mitir.
Kala-daadinta iyo rakibidda ku habboon, waxqabadka sarreeya, xasilloonida iyo xasilloonida, waxqabadka wanaagsan ee shoogga, biyuhu, dabka iyo ka hortagga daxalka, miisaanka fudud. Gurigu waa qaab dhismeed muhiim ah, oo leh qaab, darbigu waa saxan bir ah, wuxuu noqon karaa mid alwaax socdaalka guud, nolosha adeeggu waxay gaari kartaa in ka badan 20 sano.
Hore: Xerada Shaqaalaha Weelka Xerada Weelka Dhismaha
Xiga: guri weel dhaqaale oo horay loo sii qorsheeyay oo jikada lagu noolaado
guriga weel steel prefab mobile for hotel o ...